मेहनत गरे के हुँदैन र ? व्यावसायिक बाख्रापालनबाट वार्षिक २० लाख कमाई ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक मेहनत गरे के हुँदैन र ? व्यावसायिक बाख्रापालनबाट वार्षिक २० लाख ...
मेहनत गरे के हुँदैन र ? व्यावसायिक बाख्रापालनबाट वार्षिक २० लाख कमाई !
२०७६, २७ माघ सोमबार २१:३१
२१ वर्षसम्म निजी कम्पनीमा काम गरेका एक व्यक्तिले जागिर त्यागेर व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरेपछि अहिले वार्षिक २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आइरहेका छन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९, तोरीपानी काफलबोटका आनन्द रिजालले बाख्रापालनबाटै वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । शर्मा एण्ड कम्पनीमा सुपरभाइजर पदमा कार्यरत रिजालले २०७० सालमा आएर जागिर छाडेपछि ०७१ सालबाट बाख्रापालन सुरु गरेका थिए ।
सुरुमा ८ ओटा स्थानीय जातका बाख्रापालन सुरु गरेका उनले व्यावसायिक रुप दिएपछि ७२ ओटासम्म बाख्रा पालेको जानकारी दिएका छन् । उनीसँग अहिले खोरमा ठूला माउ र साना पाठापाठी गरी जम्मा ३३ ओटा बोयर जातका बाख्रा रहेका छन् । धौलागिरी व्यावसायिक बाख्रापालन बोयर मोडेल फर्म नै दर्ता गरी व्यवसाय सुरु गरेका रिजालको खोरमा हाल सबै बोयर (उन्नत) जातका बाख्राहरु छन् । बोयर जातको बाख्रालाई उन्नत जातको साथै उत्पादन राम्रो र आम्दानी आकर्षक हुने बाख्राका रुपमा मानिन्छ ।
रिजालको खोरमा अहिले ठूला (माउ) बाख्रा १९, बोका ७ र पाठापाठी ७ ओटा रहेका छन् । रिजालसँग बाख्राको गोठमा ५० ओटा बाख्रा अट्ने क्षमताको खोर रहेको छ । उनले चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म बाख्रा बिक्री गरेर साढे १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको अनुभव सुनाए ।
कृषक रिजालले बोयर जातको एउटा बोकाको मूल्य न्युनतम १८ हजारदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म पर्ने जानकारी दिएका छन्। बोयर जातको बाख्रा पालेका उनले अहिलेसम्म बोयरको एउटा बोकालाई तीनलाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताउँदै उक्त बोको ९६ केजीको रहेको बताए ।
निजी कम्पनीमा कति काम गर्ने भन्दै जागिर छाडेर व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागेका कृषक रिजालको गोठमा देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट व्यापारीहरु बाख्रा खरिद गर्न आउने गरेका छन् । बोयर जातको बाख्रालाई उत्कृष्ट मानिने भएकाले व्यापारीहरु पनि बोयरको उत्पादन खरिद गर्न खोजीखोजी आउने हुँदा बोयर जातको बाख्रापालनलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
व्यावसायिक बाख्रापालनको थालनी गरेका कृषकले रिजालले बाख्राको घाँसका लागि ३६ रोपनीको जग्गामा जै–घाँस लगाएका छन् । जै–घाँसका साथै डाले घाँसको बिरुवा समेत रोपेका उनले खेतबारीमा खनिउ, रायखन्यु, निमारो, चुलेत्रो, दुधिलो, टाँकी, बेडुलो, सुपरनेपियर र सेतरिया जातको डालेघाँसका विरुवाहरु छन् । उनले १६ सयवटा डालेघाँसका विभिन्न जातका विरुवाहरु लगाएको जानकारी दिए । भुइँघाँस सिचाईंका लागि पोखरी समेत निर्माण गरेको कृषक रिजालको भनाइ छ ।
बाख्रापालन व्यवसायमा सक्रिय रिजाल सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल रहेका छन् । जिल्ला बाख्रापालन व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रहेका रिजाल स्थानीय भूमे आधारभूत विद्यालय काफलबोटको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन्भने निलोपहरा सामुदायिक वन समूहका सदस्य छन् ।
Previous articleसमाजिक सेवामा प्रहरीसँग १०० युवा अभियान
Next articleबेनी नगरसभाबाट खुल्लामञ्चलाई मिनी रंगशाला बनाउने १ करोड विनियोजन